बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक सवारीको भाडा आजदेखि बढ्‍यो, अब कति तिर्नुपर्छ ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक सवारीको भाडा आजदेखि बढ्‍यो, अब कति तिर्नुपर्छ ?
काठमाडौं उपत्यकासहित बागमती प्रदेशमा सोमबारदेखि सार्वजनिक सवारीसाधानको भाडा बृद्धि भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको मिति २०७८ असोज २० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार कार्तिक १ गते अर्थात सोमबारदेखि बागमती प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने यात्रुवहाक सवारी साधानहरुको भाडादर बृद्धि भएको हो ।
अब उपत्यकाभित्र यात्रुले ५ किलोमिटरसम्मको यात्रा गर्दा न्युनतम भाडा १८ तिर्नुपर्नेछ भने १० किलोमिटरसम्मकाे यात्रामा २३ रुपैयाँ लाग्नेछ । यसैगरी १५ किलोमिटरसम्म २७ रुपैयाँ र २० किलोमिटसम्म ३० तथा २० किलोमिटर भन्दा माथि ३५ रुपैयाँ भाडा कायम गरिएको छ । तर यसमा विद्यार्थी, अपांगता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिकले ४५ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडा वृद्धि गरे पनि ट्याक्सीको हकमा भाडा वृद्धि भएको छैन् । ट्याक्सीमा पनि वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्नुपर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ माग छ ।